DEG-DEG: Horyaalka Bundesliga Ee Sabtida La Bilaabayo Oo Go'aan Rasmi Ah Kasoo Saaray Haddii SHAN Bedel La Adeegsanayo Kulamada - Gool24.Net
DEG-DEG: Horyaalka Bundesliga Ee Sabtida La Bilaabayo Oo Go’aan Rasmi Ah Kasoo Saaray Haddii SHAN Bedel La Adeegsanayo Kulamada
Maamulka horyaalka Germany ee Bundesliga ayaa go’aan rasmi ah ka qaatay haddii ay horyaalkooda u ogolaanayaan in kooxuhu ay sameeyaan sharci bedelkii ay dhawaan samaysay FIFA ee ahaa in shan bedel kooxdu adeegsan karto kulankiiba.
Bundesliga ayaa sida haatan lagu shaaciyay baraha horyaalkaas noqday horyaalkii ugu horreeyay ee weyn ee aqbala in ay kooxihiisu adeegsadaan shan bedel kulankiiba inta ka hadhay xilli ciyaareedka xilli horyaalkaasi uu Sabtida dib u bilaabmayo.
Inta badan jamaahiirta kubadda cagta ayaa si dhaw ula socday qaabka uu maamulka Bundesliga u raaco talaabooyinka caafimaad ee uu kaga hortagayo xanuunka Korona walow ay dadku inta badan jeclaysteen wadada uu qaaday horyaalka Talyaanigu.
Tusaale ahaan go’aanka maamulka horyaalka Talyaaniga ayaa ah in haddii hal qof laga helo xanuunka dhammaan ciyaartoyda, tababaraha iyo shaqaalaha kooxda oo dhammi ay 15 maalmood karantiin ku jiri doonaan.
Dhinaca kale qorshaha madaxda Bundesliga ayaa ah in shaqsiga laga helo xanuunka oo kaliya la karantiimi doono walow ay suurogal tahay inuu shaqaalaha iyo ciyaartoyda kale ku faafiyay.
Mid kamida sababaha ay muhiimka tahay in loo aqbalo sharciga bedelka kulamada ee wax laga bedelay ayaa ah in la yareeyo dhaawaca ciyaartoyda soo gaadhi kara maadaama la ciyaari doono iyadoo xilli xagaa badhtanka lagaga jiro isla markaana saddex maalmood oo kasta maalin la ciyaarayo.
Sidoo kale waxa jirta suurogalnimo garoomo dhex dhexaad ah lagu ciyaari karo kulamada iyadoo kulanka laga rari karo garoonka marka hore u qorshaysnaa haddii agagaarka garoonkaas ay ku bataan kiisaska xanuunku.